ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတော့ ကျနော်တို့လည်း စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့ – Nyang Media
ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတော့ ကျနော်တို့လည်း စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့
ဒါကို ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးပြဿ နာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ နိုင်ငံရေးပြဿ နာကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ စားပွဲဝိုင်းမှာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ရင်တော့ အဆင်ပြေမှုရနိုင်မှာပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ နှစ်ဘက်လုံးက မိမိလိုအပ်ချက်ကိုချည်းပဲ အပြည့်အဝ တောင်းဆိုနေကြမယ်ဆိုရင် . . .
ယမန်နေ့ ( ၂၆. ၁၀. ၂၀၁၉) ရက်နေ့က စစ်တွေမှ ဘူးသီးတောင်သို့သွားသော ရွှေနဒီရေယာဉ်တွင်စီးနင်းလိုက်ပါလာသော တပ်မတော်သားတချို့နှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များ ကို AA တပ်ဖွဲ့ က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းအောင်သိန်းကို ယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းက ငြမ်းမီဒီယာမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။ ဦးထွန်းအောင်သိန်းသည် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ၏ ဗဟိုကောင်မတီဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာ (၂၇)၊ ၂၀၁၉၊ ရန်ကုန်
ငြမ်း – ဒီနေ့နေ့လယ် ရွှေနဒီရေယာဉ်ပေါ်က နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို AA တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးထွန်းအောင်သိန်းတို့ ကြားသိထားတဲ့အခြေအနေကို ပြောပြပေးပါဦး။
UTAT – ကျနော်တို့ အခုလက်ရှိ သိရသလောက်ကလည်း လိုင်းပေါ်မှာ အခုတင်ထားသလောက်ပဲ သိရသေးတယ်။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေ လူတွေကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ် ဆိုတာလောက်ပဲ သိရသေးတယ်။ အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ငြမ်း – အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာက ဘယ်နေရာလို့ တိတိကျကျသိရပါသလဲ။
UTAT – ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြိန်းတောဆိုတဲ့ရွာနားမှာလို့ ကျွန်တော်တို့ သိရပါတယ်။
ငြမ်း – ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသူ အရေအတွက်ကို တိတိကျကျ သိရပြီလား။
UTAT – ကျနော်တို့ကြားတာကတော့ လူ (၃၀) ကျော်လောက်လို့တော့ကြားတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဘယ်သူက ဘယ်နှယောက်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကို မသိရသေးပါဘူး။
ငြမ်း – ရေယာဉ်တစ်စင်းလုံးမှာဆိုရင် ခရီးသည်စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ ဘယ်လောက်ရှိနိုင်ပါသလဲ။
UTAT – ရေယာဉ်ပေါ်မှာတော့ ပုံမှန်ဆို ခရီးသည် (၁၃၀) ၊ (၁၄၀) လောက်တော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ငြမ်း – အခုကိစ္စဟာ ဒီလ (၁၉) ရက်နေ့က AA စစ်ဦးချုပ်ရဲ့ ညီမနဲ့ သူ့အမျိုးသားကို ဖမ်းဆီးလို့ လက်တုံ့ပြန်တာလို့ ပြောလို့ရနိုင်မလား။
UTAT – ဒါကိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ငြမ်း – အခုကိစ္စကို ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်က ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှုထောင့်ကနေ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
UTAT – ဒါကတော့ နှစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်နေကြတဲ့ကိစ္စလို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
ငြမ်း – အခုလိုဖြစ်ရပ်တွေရှိလာတော့ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံမှု အခြေအနေကို ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုသုံးသပ်ကောက်ချက်ချချင်ပါသလဲ။
UTAT – သာမန်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ လုံခြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။
ငြမ်း – ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် အတိဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်နဲ့ပြောပြပေးပါဦး။
UTAT – အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတစ်ဦး ပြောထားတာရှိတယ်လေ။ ဒုက္ခသည်စခန်းကိုတောင် သူတို့မသွားရဲဘူး ဆိုတာ။ အဲဒါက လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို သက်သေပြနေတာပဲပေါ့။
ငြမ်း – စစ်ပွဲတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေ၊ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရပိုင်းက ကူညီထောက်ပံ့မှု၊ တာဝန်ယူမှုအခြေအနေက ဘယ် လိုရှိပါသလဲ။
UTAT – တာဝန်ယူမှုကတော့ အရမ်းအားနည်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီနေ့မနက်တောင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတူ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုသွားပြီး ငွေလှူခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ သူတို့ကို တစ်နေ့ ဆန်နို့ဆီဗူး (၂) လုံးပဲပေးတာ။ ကျန်တဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုက ဘာမှမရှိဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒီလိုအခြေအနေတွေ ရှိတယ်ဆိုတာတော့ ပြောချင်ပါတယ်။
ငြမ်း – ဆိုတော့ ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ အစိုးရအပေါ် ယံုံကြည်မှုက ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး။
UTAT – ဒါကတော့ ဒီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ခံစားမှုဆိုတော့ ကျနော်တို့ ကြိုပြောလို့ဘယ်ရမလဲ။ သူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့ သူတို့ဆန္ဒလို့ပဲ ပြောလို့ရမှာပေါ့။
ငြမ်း – ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေ၊ စစ်ပွဲတွေ စတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မှာ ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထားအမြင်က ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောပြပေးပါဦး။
UTAT – ကျနော်တို့ရဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေက ဒုက္ခရောက်နေကြတော့ အဲဒီခံစားမှုပေါ့။ ဒါ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီအတိုင်းခံစားနေရတာလေ။ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတော့ ကျနော်တို့လည်း စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့။
ငြမ်း – လာမယ့်လထဲမှာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြားနေရပြီ။ တကယ် လို့များ ဆွေးနွေးမှု အဆင်ပြေရင် ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ရေးတင်းမာမှု အရှိန်အဟုန်က လျော့ကျလာနိုင်ပါသလား။
UTAT – အဲဒါကိုပြောရရင် အဓိကကတော့ နှစ်ဘက်ပြေလည်မှုရရင်တော့ ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေ အေးချမ်းမှာပေါ့ဗျာ။ ပြေလည်မှုမရဘူး၊ ပြေလည်မှုရဖို့ အလှမ်းဝေးနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ ဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေဦးမှာပေါ့။
ငြမ်း – အခုပြောသွားတာမှာ “ ပြေလည်မှုရရင်” ဆိုတဲ့စကားပါတော့ မပြေမလည်ဖြစ်နေရတာ ဘာကြောင့်လို့ ဦးထွန်းအောင်သိန်းယူဆပါသလဲ။
UTAT – ဒါကို ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးပြဿ နာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ နိုင်ငံရေးပြဿ နာကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ စားပွဲဝိုင်းမှာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ရင်တော့ အဆင်ပြေမှုရနိုင်မှာပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ နှစ်ဘက်လုံးက မိမိလိုအပ်ချက်ကိုချည်းပဲ အပြည့်အဝ တောင်းဆိုနေကြမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းပြေလည် ဖို့အတွက် ခက်ခဲနေဦးမှာ။ ဆိုတော့ စားပွဲဝိုင်းမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် ညီညီမျှမျှပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ ကင်းဝေးသွားမှာပေါ့။
ငြမ်း – ဦးထွန်းအောင်သိန်း ပြောတာမှာ “ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးပြဿ နာ” ဆိုတဲ့စကားပါတော့ နိုင်ငံရေးပြဿ နာကို စစ်ရေးနဲ့ဖြေရှင်းနေတာကြောင့် အခုလို ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေရတာလို့ ပြောချင်တာလား။
UTAT – ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ရေးနဲ့ဖြေရှင်းပြီးနောက် မှာ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းရတာပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဖြစ်နေတဲ့ပြဿ နာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ် ပြေလည်သွားကြတာပဲ။ အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးပြဿ နာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှ ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာ သက်သာမှာပေါ့။ နိုင်ငံလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပေါ့။
ငြမ်း – ဘာများဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိသေးလည်း။
UTAT – ပြောစရာမရှိပါဘူး။
ငြမ်း – ခုလိုဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Photo – ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ facebook Page
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းအောင်သိန်း
အသံချဲ့စက် ဆူညံမှုနဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်
ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်မှာ မိသားစုဆိုတာကတော့ ရှိမှာပဲလေ